I-9x20 Podcast: Ngaba iApple ayilunganga ngePod yasekhaya? | IPhone iindaba
I-HomePod imalunga nokufikelela kubathengi bayo bokuqala e-United States, eNgilani nase-Australia, kodwa uphononongo lokuqala sele lukhona kwiiblogi ezibalulekileyo kula mazwe. Wonke umntu uyavuma ukuba umgangatho ubalaseleyo, ungcono kwicandelo lawo, kodwa iApple ayilunganga ukunyanzelisa ukuvala uSiri kwindalo yayo, ekunikezeni ukufikelela kwezinye iinkonzo ezinje ngeSpotify okanye ekunciphiseni imisebenzi yomncedisi obonakalayo. Ngaba le yimpazamo okanye ngaba ngabom? Oku kunye nezinye iindaba kule veki kwipodcast yethu.
Ukongeza kwiindaba kunye noluvo malunga neendaba zeveki, siza kuphendula nemibuzo evela kubaphulaphuli bethu. Kwitshaneli yethu yeTelegram (unxibelelwano) Ungasibuza imibuzo yakho usebenzisa i-hashtag #podcastapple ukusibuza ukuba ufuna ntoni, Senze iingcebiso okanye nantoni na ethi qatha engqondweni. Amathandabuzo, izifundo, uluvo kunye nokuphononongwa kwezicelo, nantoni na inendawo kweli candelo eya kuthi ihlale kwinxalenye yokugqibela yepodcast yethu kwaye sifuna ukuba usincede senze veki nganye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » I-9 × 20 Podcast: Ngaba iApple ayilunganga ngePod yasekhaya?
Uzivula njani iithebhu ezisandula ukuvalwa kwi-Safari
I-Apple ithathe indawo yeemodeli ze-16Gb ze-iPhone 5c kunye neemodeli ezingama-32Gb